जानौं बसेर खाना खानुको फाइदाबारे... | Hamro Doctor News
बुधबार, ११ आषाढ़ २०७६ /
शिशुमा यी समस्या देखिए अप्रेशन गरिहाल्नुपर्छ
संविधानसँग बाँझिएको मुलुकी संहिताको केही व्यवस्था खारेजीको मागसहित रिट दायर
मलेरिया रोगको पहिचान गर्न रगत नचाहिने प्रविधि आउँदै
पिसाब फेर्दा अप्ठयारो हुन्छ ? सङ्क्रमण पनि भएको हुनसक्छ
चिकित्सा अभ्यास लाइसेन्स नै नभएका व्यक्तिलाई ‘चिकित्सक’को दर्जामा विभूषित
'चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास नहुनुमा शिक्षामन्त्री जिम्मेवार'
जानौं बसेर खाना खानुको फाइदाबारे...
आजभोली सबैको दिनचर्या भागदौड मै बितिरहेको छ । कोहि सँग पनि बसेर कसैको कुरा सुन्ने समय हुँदैन । कुरा सुन्न त पर जावोस बसेर खाना खाने समय पनि कोहि सँग हुँदैन । प्रायः जसो व्यक्ति उभेरै खाना खाने गरेको देखिन्छ भने कतिपय व्यक्ति हिँड्दा हिँड्दै खाना खाने गरेको पनि देख्न सकिन्छ । तर, के तपाईंलाई थाहा छ यसरी उभेर वा हिँड्दा हिँड्दै खाना खानाले तपाईंको पिठ्यूको हड्डीको साथै मानसिक स्वास्थ्यमा नोक्सान पुर्याउँछ भनेर ।
पाचन प्रणालीमा हुन सक्छ समस्या
जब हामी उभेर खाना खान्छौँ तब खाना पच्नमा निकै समय लाग्ने गर्छ । साथै हतार गर्ने क्रममा व्यक्तिले आवश्यक्ता भन्दा धेरै खाना पनि खाइदिन्छन् । धेरै खाना र त्यो खाना सुस्त गतिमा पाचन हुने हुँदा पेट सँग सम्बन्धीत समस्याले सताउन सक्छ ।
बसेर खाना खानुको फाइदा
तलब बसेर खाना खाने क्रममा हामी जुन तरिकाले बस्छौं त्यो योगको एक क्रिया सँग मिल्दो जुल्दो हो । खुट्टालाई मोडेर बस्नु, खानाको गाँस लिनका लागि अघि झुक्नु र फेरि सिधा भएर खाना खानु यसले पेटमा भएका सम्पूर्ण मांसपेशीलाई पाचन रस निकाल्नमा मद्दत गर्छ । जसले खाना सजिलै पच्छ ।
पिठ्यूसँग सम्बन्धीत समस्यामा कमि
नियमित तल बसेर खाना खानाले शरीर अझ फ्लेक्जिबल हुन्छ । तल बस्ने क्रममा हामी जुन तरिकाले खाना खान्छौं त्यसले पिठ्यूलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ । यसले पिठ्यूको साथै तपाईंको ब्याक पेनलाई पनि कम गर्नमा मद्दत गर्छ ।
तौल नियन्त्रण गर्नमा राहत
बसेर खाना खानाले पेट छिट्टै भर्छ भने उभेर खाना खाँदा धेरै खाइन्छ । यस अवस्थामा स्वभाविक रुपले तौल बढ्न जान्छ । त्यस कारण तौल नियन्त्रण गर्न चाहनुहुन्छ भने जति सुकै हतार भएपनि बसेरै खाना खाने बानी बसाल्नुहोस् ।
उभेर खाने क्रममा हामी धेरै झुक्ने गर्छौ र साथै आफूलाई सहज महसुस गराउन शरीरको कुनै एक भागमा धेरै दववा दिन पुग्छौं । नियमित यसो गर्नाले पीठ्यूको हड्डीमा असर पर्न थाल्छ र तपाईंको शरीर नै झुकेको देखिन थाल्छ । तर, बसेर खाना खानाले तपाईंको शरीर सँधै एक समान आकर्षक देखिन्छ ।
रक्त सञ्चारमा सुधार, मुटु रहन्छ स्वस्थ
तल बसेर खाना खानाले शरीरमा रगतको बहाव र रक्त सञ्चालन पनि राम्रो हुन्छ । क्रस लेग अर्थात पलेटी कसेर बस्नाले नसाहरुमा खितावट कम हुन्छ र त्यसले आराम दिलाउँछ । यसले मुटु वरपरको प्रेसरलाई पनि कम गर्छ र मुटुलाई बलियो बनाउँछ ।
(भारतीय अनलाईन नवभारत टाईम्सबाट)
Last modified on 2018-12-19 15:21:20
बुटबलका सबै वडामा निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने
रुपन्देही, ११ असार । बुटबल उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ ।...
गर्मीमा बढ्छ माइग्रेनको दुखाईः कम गर्न के गर्ने ?
काठमाडौं, ११ असार । माइग्रेन एक प्रकारको टाउको दुखाइ हो । यसको दुखाइ निकै...
विश्व सेतो दुबी दिवस मनाइयो
काठमाडौं, १० असार । हरेक वर्ष २५ जुनका दिन ‘विश्व दुबी दिवस’ विश्वभर...
के तपाईंलाई सेतो दुबीले सताएको छ ?
के हो सेतो दुबी ? छाला सेतो बनाउने रोगहरु मध्ये सेता दुवीले संसारको...
अब सरकारी खर्चमा विदेश गएर उपचार गर्न नपाइने
स्वास्थ्यका कर्मचारीले समायोजन पत्र पाउने समय अनिश्चित, समायोजनमा पहिलेभन्दा बढि ‘लफडा’
उचाइ बढाउन सम्भव छ ? जानौं (भिडियो सहित)
एल्लोपेथीक डाक्टर सुभाषले देखाए योग अभ्याँसका ८ फाइदा
सेतो दुबी रोग होइन, सम्भव छ उपचार
भरतपुर अस्पताल कर्मचारी युनियनको ९ सदस्यीय कार्यसमिति गठन
नेपालमा अकुपंचर उपचार पद्धति लोकप्रिय बन्दै, के के ठीक हुन्छ अकुपंचरबाट ?-डा. जया सत्याल
योनी किन चिलाउँछ ?
जनै खटिराको बेलैमा उपचार नभए मृत्यु ?
पाठेघर खस्ने रोगले क्यान्सर समेत निम्त्याउन सक्छ !